Ngoku umthetho ngu imperfect. Kwaye esi statement nzima ukuba awuvumi kangakanani. Ngelishwa, zonke kuthi nangaliphi na kanye kwindawo enye indlela okanye omnye unako ingene uqhagamshelane ne-a-mthetho meko ukuba enze njengoko umtyholwa, suspects, amangqina okanye victims
Kufuneka kuqatshelwe ukuba namhlanje wonke umntu unelungelo isibonelelo umntu isemthethweni uncedo a lawyer, ulwaphulo-mthetho, nokuba bakhe isimo yolwaphulo-nkqubo. Iingcali abo anike ezi zi iinkonzo ngokuba abaqondisi-mthetho. Oku asikuko ukuba kuthi ukuba umntu unelungelo hayi kuphela ukubonelela umgangatho isemthethweni ukumelwa, kwaye free inkonzo.
Kwi-mthetho kukho ezininzi izikhokelo, ngokulandelelana kwayo, kwaye abaqondisi-mthetho kuza ezahlukeneyo zabucala. Kunjalo, ngaphandle okukodwa, abaqondisi-mthetho basemazweni okhethekileyo inkcazelo kwaye kuba ngaphezulu isemthethweni imfundo. Kodwa kuphela, ulwaphulo-mthetho lawyer ingaba exabisekileyo ulwazi kunye namava entsimini ka-jurisprudence. Isizathu lento yokuba i-u-phantse yonke imihla nomngeni kunye real ukuba iimeko zifuna umntu isemthethweni uncedo.Oko absolutely azinako wathi malunga advocates kwezinye iindawo, umzekelo, technician abantliziyo umsebenzi ifakiwe kunye usapho umthetho.